Umgaqo-nkqubo wabucala-ISICWANGCISO SEFOMU YESIXEKO → Uyilo lweeDolophu ezincinci ☆ I-Metalco ☆ I-Bellitalia
Umgaqo-nkqubo wabucala kunye neekuki ("Umgaqo-nkqubo wabucala")
Lo Mgaqo-nkqubo wabucala ubonakalisa ukukhathalela amalungelo abatyeleli kwiwebhusayithi kwaye usebenzisa iinkonzo ezibonelelwa ngayo. Kukwazalisekiswa kwesibophelelo solwazi phantsi kobugcisa. I-13 yoMmiselo (i-EU) ngo-2016/679 yePalamente yaseYurophu kunye neBhunga ngomhla wama-27 ku-Epreli ngo-2016 malunga nokukhuselwa kwabantu ngokubhekisele ekusebenzeni kwedatha yobuqu kunye nokuhamba simahla kwedatha enjalo, nokubhangiswa kwe-Directorate 95/46 / EC (imigaqo ngokubanzi malunga nokhuseleko idatha yobuqu) (IJenali yeMithetho ye-EU L119 kaMeyi 4.05.2016, 1, iphe. XNUMX) (apha ekubhekiswa kuyo njengeGDPR).
Umnini wewebhusayithi uhlawula ingqalelo ekhethekileyo ekuhlonipheni ubumfihlo babasebenzisi bewebhusayithi. Idatha efunyenwe njengenxalenye yewebhusayithi ikhuselwe ngokukhethekileyo kwaye ikhuselekile ekufikeleleni kwabantu abangagunyaziswanga. Umgaqo-nkqubo wabucala wenziwe wafumaneka kubo bonke abantu abanomdla. Iwebhusayithi ivulekile.
Umnini wewebhusayithi uqinisekisa ukuba injongo yayo ebalaseleyo yokubonelela ngewebhusayithi zisebenzisa ukhuseleko lwabucala kwinqanaba ubuncinci elihambelana neemfuno zomthetho osebenzayo, ngakumbi amalungiselelo eGDPR kunye noMthetho we-18 kaJulayi ngo-2002 malunga nokunikezelwa kweenkonzo zombane.
Umnini webhusayithi unokuqokelela idatha yobuqu kunye nenye. Ukuqokelelwa kwezi datha kwenzeka, kuxhomekeke kuhlobo lwazo-ngokuzenzekelayo okanye ngenxa yezenzo zabatyeleli kwiwebhusayithi.
Umntu ngamnye osebenzisa iwebhusayithi nangayiphi na indlela wamkela yonke imigaqo ekule Mgaqo-nkqubo wabucala. Umnini wewebhusayithi unelungelo lokufumana utshintsho kolu xwebhu.
Ulwazi ngokubanzi, iikuki
Umnini kunye nomnxibelelanisi wewebhusayithi yi-Water Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością eneofisi ebhalisiweyo eWarsaw, idilesi: ul. I-Fort Służew 1b / 10 Fort 8, 02-787 Warszawa, wangena kwiRejista yabarhwebi beRegional National Rejista egcinwe yiNkundla yeSithili eWarsaw, iCandelo lezoRhwebo lerejista yeNkundla kaZwelonke, phantsi kwenombolo ye-KRS: 0000604168, inombolo ye-NIP: 5213723972, inombolo ye-REGON: 363798130. Ngokuhambelana Imigaqo ye-GDPR, umnini wewebhusayithi ukwanguMlawuli weDatha yaBasebenzisi bewebhusayithi ("Umlawuli").
Njengenxalenye yemisebenzi eyenziweyo, uMlawuli usebenzisa iicokies ngendlela yokuba ebukele kwaye ahlalutye ukugcwala kwitrafikhi yewebhusayithi, esenza imisebenzi yokuphinda-phinda, nangona kunjalo, njengenxalenye yale misebenzi, uMlawuli akaqhubeki nedatha yobuqu ngaphakathi kwentsingiselo ye-GDPR.
Iwebhusayithi iqokelela ulwazi malunga nabasebenzisi bewebhusayithi kunye nokuziphatha kwabo ngale ndlela ilandelayo:
iwebhusayithi iqokelela ngokuzenzekelayo ulwazi oluqulathwe zicookies.
ngedatha efakwe ngokuzithandela ngabasebenzisi bewebhusayithi, kwiifom ezifumaneka kumaphepha ewebhusayithi.
ngokuqokelela okuzenzekelayo kwewebhu yemigca yewebhu ngumqhubi wokubamba.
Iifayile zekuki (ebizwa ngokuba yi "cookies") yidatha ye-IT, ngakumbi iifayile zombhalo, ezigcinwe kwifowuni yomsebenzisi wewebhusayithi kwaye zenzelwe ukusetyenziswa kwamaphepha ewebhusayithi. Iikuki zihlala zinegama le webhusayithi ezivela kuzo, ixesha lokugcina isixhobo esiphelweni kunye nenombolo eyahlukileyo.
Ngexesha lotyelelo kwiwebhusayithi, idatha yabasebenzisi bewebhu inokuqokelelwa ngokuzenzekelayo, ngokunxulumene notyelelo lomsebenzisi olunikezelwe kwiwebhusayithi, kubandakanya, phakathi kwabanye, Idilesi ye-IP, uhlobo lwebrawuza yewebhu, igama lesizinda, inani leemboniselo zephepha, uhlobo lwenkqubo yokusebenza, ukutyelelwa, ukulungiswa kwesikrini, inani lemibala yesikrini, iidilesi zewebhusayithi apho iwebhusayithi ifikelele khona, ixesha lokusebenzisa iwebhusayithi. Ezi datha azizizo iinkcukacha zobuqu, kwaye azivumeli ukuphawulwa komntu usebenzisa iwebhusayithi.
Kunokubakho amakhonkco kwezinye iwebhusayithi kwiwebhusayithi. Umniniwebhusayithi akanoxanduva lokuzenzela izinto zangasese. Kwangelo xesha, umnini wewebhusayithi ukhuthaza umsebenzisi wewebhusayithi ukuba afunde umgaqo-nkqubo wabucala osekwe kwezi webhusayithi. Lo Mgaqo-nkqubo wabucala awusebenzi kwezinye iiwebhusayithi.
Umnini wewebhusayithi liziko elibeka iicookies kwisixhobo somsebenzisi wewebhusayithi kwaye lifumane ukufikelela kubo.
Ukulungelelanisa iziqulatho zamaphepha e-webhusayithi kwizinto ezithandwa ngumsebenzisi wewebhusayithi kunye nokwenza ukuba usetyenziswe kakhulu yiwebhusayithi; ngokukodwa, ezi fayile zivumela ukwamkela isixhobo somsebenzisi wewebhusayithi kwaye zibonise ngokufanelekileyo iwebhusayithi, elungiselelwe iimfuno zakhe ezizodwa,
ukwenza izibalo ezinceda ukuqonda indlela abasebenzisi bewebhusayithi abazisebenzisa ngayo iiwebhusayithi, ezivumela ukuphuculwa kobume babo kunye nomxholo,
ukugcina iseshoni yomsebenzisi wewebhusayithi (emva kokungena ngemvume), enkosi ekungafanelekanga ukuba angenise kwakhona igama lakhe lokungena kunye nephasiwedi kuyo yonke into esezantsi yewebhusayithi.
Iwebhusayithi isebenzisa ezi ndlela zilandelayo zicookies:
I "cookies eziyimfuneko", ezivumela ukusetyenziswa kweenkonzo ezikhoyo kwiwebhusayithi, o.ukhuphiswano lokuqinisekisa,
Iicookies ezisetyenziselwa ukuqinisekisa ukhuseleko, umz.
"Iindlela zokusebenza" kuki, esetyenziselwa ukufumana ulwazi ngokusetyenziswa kwamaphepha ewebhu ngabasebenzisi bewebhusayithi,
"I-cookies" zentengiso, ezenza ukuba abasebenzisi bewebhusayithi babonelele ngesiqulatho sentengiso silungiselelwe iimfuno zabo,
"Iikuki" ezisebenzayo, zenza ukuba "ukhumbule" useto olukhethwe ngumsebenzisi wewebhusayithi kunye nokuhlengahlengisa iwebhusayithi nomsebenzisi wewebhusayithi, umzekelo ngokwemigaqo yolwimi olukhethiweyo.
Iwebhusayithi isebenzisa ezimbini iintlobo ezisisiseko zicookies: iikuki zeseshoni kunye cookies ezingapheliyo. Iicookies zeseshoni ziifayile zethutyana ezigcinwe kwizixhobo zokugqibela de ziphume kwiwebhusayithi, phuma ngumsebenzisi wewebhusayithi okanye ucime isoftware (isikhangeli sewebhu). Iicookies ezingapheliyo zigcinwa kwindawo yokugcina umsebenzisi wewebhusayithi yexesha elichazwe kwimida yefayile yekhukhi okanye de bacinywe ngumsebenzisi wewebhusayithi.
Uninzi lwamatyala, isoftware esetyenziselwa ukukhangela iiwebhusayithi ngokungagqibekanga ivumela ikuki ukuba zigcinwe kwisixhobo somsebenzisi wewebhusayithi. Abasebenzisi bewebhusayithi banokhetho lokutshintsha iiseto zekhukhi nangaliphi na ixesha. Olu seto lungatshintshwa ngokhetho lwebrawuza yewebhu (isoftware), phakathi kwezinye izinto, ngendlela ethintela ukuphathwa okuzenzekelayo kweicookies okanye kunyanzele umsebenzisi wewebhusayithi aziswe ngalo lonke ixesha iicokies zifakwe kwisixhobo sabo. Ulwazi oluneenkcukacha malunga nezinto ezinokubakho kunye neendlela zokuphatha ii-cookies ziyafumaneka kuseto lwesikhangeli sewebhu.
Izithintelo ekusetyenzisweni kweicookies zinokuchaphazela imisebenzi ethile ekhoyo kumaphepha ewebhusayithi.
Iikuki ezibekwe kwisixhobo sokugqibela sewebhusayithi zinokusetyenziswa ngabathengisi kunye namaqabane asebenzisana nomnini wewebhusayithi.
Ukulungiswa kwedatha yobuqu, ulwazi malunga neefom
Idatha yobuqu yabasebenzisi bewebhusayithi inokuqhutywa nguMlawuli:
Ukuba umsebenzisi wewebhusayithi uyavumelana nayo kwiifom ezithunyelwe kwiwebhusayithi, ukuze athathe amanyathelo ezihambelana nawo ezi fom (iNqaku 6 (1) (a) le-GDPR)
xa ukwenziwa kwemfuneko kuyenziwa ukulungiselela ukwenziwa kwemvumelwano apho umsebenzisi wewebhusayithi ayiliqela (iNqaku lesi-6 (l) (b) le-GDPR), ukuba iwebhusayithi iyenza ukuba iqukunjelwe imvumelwano phakathi koMlawuli nomsebenzisi wewebhusayithi
Njengenxalenye yewebhusayithi, idatha yobuqu iphathwa ngokuzithandela ngabasebenzisi bewebhusayithi. Umlawuli wenza iinkqubo zedatha yabasebenzisi bewebhusayithi kuphela ukuya kwinqanaba eliyimfuneko kwiinjongo ezibekiweyo kwinqaku 1 lit. a kunye b ngaphezulu nangexesha elifanelekileyo ukufezekisa ezi njongo, okanye de umsebenzisi wewebhusayithi arhoxise imvume yakhe. Ukusilela ukubonelela ngedatha ngumsebenzisi wewebhusayithi, kwezinye iimeko, kunokubangela ukungakwazi ukufezekisa iinjongo zokubonelela ngedatha.
Le datha yobuqu ilandelayo yomsebenzisi wewebhusayithi inokuqokelelwa njengenxalenye yeefom ezithunyelwe kwiwebhusayithi okanye ukuze wenze izivumelwano ezinokugqitywa njengenxalenye yewebhusayithi: igama, ifani, idilesi, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, ukungena, ipaswedi.
Idatha equlethwe kwiifom, enikezwe kuMlawuli ngumsebenzisi wewebhusayithi, inokudluliselwa nguMlawuli kumaqela wesithathu asebenzisana noMlawuli ngokunxulumene nokuphunyezwa kweenjongo ezichazwe kwi-1. a kwaye b ngaphezulu.
Idatha enikezwe kwiifom kwiwebhusayithi iphononongwa ngeenjongo ezibangelwa kukusebenza kwefom ethile, ukongeza, inokusetyenziswa nguMlawuli ukulungiselela ugcino kunye neenkcukacha-manani. Imvume yesifundo sedatha ibonakaliswa ngokukhangela kwifestile efanelekileyo kwifom.
Umsebenzisi wewebhusayithi, ukuba iwebhusayithi inezinto ezisebenzayo, ngokukhangela kwifestile efanelekileyo kwifom yobhaliso, unokwala okanye avume ukufumana ulwazi ngorhwebo ngeendlela zonxibelelwano ngombane, ngokungqinelana nomthetho we-18 kaJulayi 2002 malunga nokubonelelwa ngeenkonzo zombane ( Ijenali yeMithetho ka-2002, Nomb. 144, into 1024, njengoko ulungisiwe). Ukuba umsebenzisi wewebhusayithi uvumile ukufumana ulwazi lurhwebo ngeendlela zonxibelelwano ngombane, unelungelo lokurhoxisa imvume ngalo naliphi na ixesha. Ukusetyenziswa kwelungelo lokurhoxisa imvume yokufumana ulwazi kurhwebo lwenziwa ngokuthumela isicelo esifanelekileyo nge-imeyile kwidilesi yomnini wewebhusayithi, kubandakanya igama kunye nefani yomsebenzisi wewebhusayithi.
Idatha enikezwe kwiifom inokudluliselwa kumacandelo abonelela ngeenkonzo ezithile - ngakumbi, oku kusebenza ekudluliseleni ulwazi malunga nomnini wedomeyini ebhalisiweyo kwiziko elingabasebenzi be-Intanethi ye-Intanethi (ngokukodwa isayensi kunye neZifundo zekhompyuter ye-Intanethi yeKhompyuter jbr - NASK), iinkonzo zokuhlawula okanye amanye amaziko, apho uMlawuli olusebenzayo kule meko.
Idatha yobuqu yabasebenzisi bewebhusayithi igcinwe kwindawo yokugcina idatha apho kuye kwasetyenziswa amanyathelo obuchwephesha kunye nawombutho ukuqinisekisa ukhuseleko lwedatha esetyenzisiweyo ngokuhambelana neemfuno ezichazwe kwimigaqo efanelekileyo.
Ukwenzela ukuthintela ukubhaliswa kwakhona kwabantu abathathe inxaxheba kwiwebhusayithi ukupheliswa ngenxa yokusetyenziswa okungagunyaziswanga kweenkonzo zewebhusayithi, uMlawuli unokwala ukucima ulwazi lobuqu oluyimfuneko ukuthintela ubhaliso kwakhona. Isiseko esisemthethweni sokwala yi-Art. Umhlathi we-19 2 inqaku 3 ngokunxulumene neArt. 21 isiqe. 1 yoMthetho we-18 kaJulayi ngo-2002 malunga nokubonelelwa ngeenkonzo ze-elektroniki (okt nge-15 ka-Okthobha ka-2013, iJenali yeMithetho ka-2013, into 1422). Ukwala kukaMlawuli ukucima idatha yobuqu yabasebenzisi bewebhusayithi kunokwenzeka nakwezinye iimeko ezinikezwe ngumthetho.
Kwiimeko ezibonelelwe ngumthetho, uMlawuli unokuchaza ezinye iinkcukacha zedatha yabasebenzisi bewebhusayithi kwiqela lesithathu ngeenjongo ezinxulumene nokukhusela amalungelo abantu besithathu.
Umlawuli unelungelo lokuthumela i-imeyile kubo bonke abasebenzisi bewebhusayithi ngezaziso malunga notshintsho olubalulekileyo kwiwebhusayithi nangotshintsho kulo Mgaqo-nkqubo wabucala. Umlawuli unokuthumela iileta zombane zentengiso, ngakumbi intengiso kunye nolunye ulwazi lwentengiso, ukuba umsebenzisi wewebhusayithi uvumile kuyo. Iintengiso kunye nolunye ulwazi lwentengiso lusenokuqhotyoshelwa kwiileta ezingenayo nezphumayo ezivela kwiakhawunti yenkqubo.
Amalungelo abasebenzisi benkonzo ngokubhekisele kwidatha yabo yobuqu ngokulandela ubuGcisa. 15 - 22 GDPR, umsebenzisi ngamnye wewebhusayithi unamalungelo alandelayo:
Ilungelo lokufumana idatha (iNqaku le-15 le-GDPR)Isifundo sedatha sinelungelo lokufumana kuMlawuli isiqinisekiso sokuba ngaba iinkcukacha zomntu malunga naye ziyenziwa, kwaye ukuba kunjalo, ukufikelela kuzo. Ngokutsho kobugcisa. Umlawuli uya kubonelela ngesifundo sedatha ngekopi yedatha yobuqu eyenziwayo.
Ilungelo lokulungisa idatha (iNqaku le-16 le-GDPR)Umxholo wedatha unelungelo lokucela uMlawuli ukuba alungise kwangoko idatha engeyiyo malunga naye.
Ilungelo lokucima idatha ("ilungelo lokulityalwa") (Inqaku le-17 le-GDPR)Isifundo sedatha sinelungelo lokucela uMlawuli ukuba ayicime ngokukhawuleza idatha yakhe, kwaye uMlawuli unyanzelekile ukuba acime idatha yakhe ngaphandle kokulibazisa okungafanelekanga ukuba kwenzeke enye yezi meko zilandelayo:
Iinkcukacha zobuqu azisadingeki ngenxa yeenjongo zokuqokelelwa kwazo okanye kungenziwa ngazo ngenye indlela;
Umxholo wedatha urhoxisile imvume esekwe kuyo inkqubo
izinto zedatha ezifundwayo kulwandiso ngokuhambelana nezoBugcisa. 21 isiqe. 1 ngokuchasene nokuqhubekeka kwaye akukho zizathu zigqwesileyo zomthetho
Ilungelo lokuthintelwa kokusebenza (iNqaku le-18 le-GDPR)Isifundo sedatha sinelungelo lokucela uMlawuli ukuba anciphise ukusebenza kwezi meko zilandelayo:
Xa idatha ingachanekanga- ngexesha lokuyilungisa
Umxholo wedatha uphikisile ngokulandela ubuGcisa. 21 umzuzwana 1 ngokuchasene nokuqhubekeka - de kube kumiselwe ukuba ingaba izizathu ezisemthethweni zecandelo loMlawuli zigqithile kwizizathu zokuchasa isifundo sedatha.
Ukulungiswa akukho semthethweni kwaye isihloko sedatha sichasene nokucinywa kwedatha yangasese kwaye icele ukuthintelwa kokusetyenziswa kwayo endaweni yoko.
5. Ilungelo lokuthwala idatha (iNqaku 20 GDPR)Isifundo sedatha sinelungelo lokufumana, kwifomathi eyakhiwe, esetyenziswa ngokufuthi, efundeka ngomatshini, idatha yobuqu malunga naye, awayinika uMlawuli, kwaye inelungelo lokuthumela le datha yobuqu komnye umlawuli ngaphandle kwemiqobo evela kuMlawuli apho idatha yakhe ibonelelwe khona. Isifundo sedatha sinelungelo lokucela ukuba idatha yobuqu ithunyelwe nguMlawuli ngqo komnye umlawuli, ukuba kunokwenzeka ubuchwephesha. Umthetho ekubhekiswa kuwo kweli candelo awunakuchaphazela kakubi amalungelo nenkululeko yabanye.
6. Ilungelo lokuchasa (ubuGcisa 21 GDPR)Ukuba idatha yobuqu iqhutyelwa iinjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo, umxholo wedatha unelungelo lokuphikisa nanini na ekuqhubekekeni kwedatha yakhe yobuqu ngeenjongo zokuthengisa, kubandakanya ukuprofeta, ukuya kuthi ga apho ukuqhubekeka kunxulumene nokuthengisa ngokuthe ngqo. .
Ukuphunyezwa kwala malungelo anentlahla abasebenzisi bewebhusayithi kunokwenzeka ngokuchasene nokuhlawulwa kwiimeko apho umthetho ofanelekileyo ubonelela wona.
Kwimeko yokophulwa kwamalungelo angentla apha okanye umsebenzisi wewebhusayithi afumanise ukuba idatha yakhe buqu iyenziwa nguMlawuli ngokuchasene nomthetho osebenzayo, umsebenzisi wewebhusayithi unelungelo lokufaka isikhalazo kwiqumrhu elongameleyo.
Ngokuhambelana nendlela eyamkelweyo yeewebhusayithi ezininzi, umqhubi wewebhusayithi ugcina imibuzo ye-http ebhekiswa kwiseva yomqhubi wewebhusayithi (ulwazi malunga nokuziphatha kwabasebenzisi bewebhusayithi bangene kumqolo weserver). Izixhobo ezikhangeliweyo zichongwe kwiidilesi ze-URL. Uluhlu oluchanekileyo lolwazi olugcinwe kwiifayile zewebhu zewebhu limi ngolu hlobo lulandelayo:
Idilesi ye-IP kawonkewonke yekhompyuter apho kuphume khona uphando.
igama lesikhululo somthengi-uchonga olwenziwe ngumgaqo olandelwayo we-http, ukuba kunokwenzeka,
igama lomsebenzisi lwewebhu elinikezwe kwinkqubo yogunyaziso (yokungena),
Inani le-byte ezithunyelwe ngumncedisi,
Idilesi ye-URL yephepha elalikhe latyelelwa ngumsebenzisi wewebhusayithi (ikhonkco lonxibelelwano) - ukuba iwebhusayithi ifikeleleke ngekhonkco,
ulwazi malunga nomkhangeli wewebhu wewebhusayithi,
ulwazi malunga neempazamo ezenzekileyo ngexesha lenkqubo yokuqhutywa kweTV.
Le datha ingentla ayinxulunyaniswa nabantu abathile abakhangela kumaphepha afumaneka kwiwebhusayithi. Ukuqinisekisa umgangatho ophezulu wewebhusayithi, umqhubi wewebhusayithi uhlahlela iifayile zokujonga ukuba ngawaphi amaphepha ngaphakathi kwiwebhusayithi atyelelwa rhoqo, zeziphi izikhangeli zewebhu ezisetyenziswayo, nokuba ngaba isakhiwo sewebhusayithi asinazimpazamo, njl.
Izixhobo eziqokelelwe ngumqhubi zigcinwa ixesha elingapheliyo njengezinto ezincedisayo ezisetyenziselwa ulawulo lwebhusayithi. Ulwazi oluqulathwe kulo aluyi kwaziswa nakweliphi na icandelo ngaphandle komphathi okanye izinto ezinxulumene nomsebenzisi buqu, ngekapitali okanye ngesivumelwano. Ngokusekwe kulwazi oluqulathwe zezi fayile, izibalo zinokuveliswa ukunceda ukuphatha iwebhusayithi. Isishwankathelo esinezibalo azinazimpawu ezichonga iindwendwe zewebhusayithi.